रैराङ हाइड्रो पावरले वैशाख ३१ बाट साधारण सेयर निष्कासन गर्ने - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
रैराङ हाइड्रो पावरले वैशाख ३१ बाट साधारण सेयर निष्कासन गर्ने
बैशाख २१, २०७५ 4030 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले आगामी वैशाख ३१ गतेबाट साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले ताप्लेजुङ र पाँचथरको सीमामा निर्माणाधीन ९.९ मेगावाटको इवाखोला जलविद्युत आयोजनाको सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँड गर्न लागेको हो ।
प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित्त ८ करोड ४० लाख रुपैयाँको ८ लाख ४० हजार कित्ता सेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँड गरिने कम्पनीले जनाएको छ । सेयर निष्कासन तथा बाँडफाँड गर्न एस क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकिएको छ । लगानीकर्ताले वैशाख ३१ गतेबाट छिटोमा जेठ ३ तथा ढिलोमा २९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् ।
निष्कासन हुने कुल सेयरमध्येबाट ३३ हजार ६ सय कित्ता कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी र ४२ हजार कित्ता समूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी ७ लाख ६४ हजार ४ सय कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुल्ला गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
सेयर खरिद गर्न न्युनतम ५० देखि अधिकतम ४ हजार २ सय कित्तासम्मका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने छन् । साधारण सेयर निष्कासनबाट ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ ।
कम्पनीले यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि सेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँड गरेको थियो ।